ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးချစ်ပြုံး ကွယ်လွန်သွားတာ ရက်(၁၀၀)ကျော်ပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိ လွမ်းဆွတ်နေရှာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဂွမ်းပုံကြီး – Shwe Likes
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးချစ်ပြုံး ကွယ်လွန်သွားတာ ရက်(၁၀၀)ကျော်ပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိ လွမ်းဆွတ်နေရှာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဂွမ်းပုံကြီး
ပရိသ တ်တွေချစ်ခင် အားပေးရတဲ့သ ရုပ်ဆောင်တွေဖြစ် ကြတဲ့ဂွမ်း ပုံကြီးနဲ့ဦးချစ်ပြုံး တိူ့ကတော့ အနုပညာနယ်ပ ယ်မှာဆယ် စုနှစ်တခုကြာ ရပ်တ ည်ခဲ့တဲ့သူတွေ လည်းဖြစ် ပါတယ်။ ကျရာဇာတ် ရုပ်မှာပီပြင်ပိုင်နိုင် စွာသရု ပ်ဆောင်နိုင်ြ ပီးလိုက် ဖက်တဲ့အနုပညာ စုံတွဲလည်းဖြစ်ပါတ ယ်။
ဇာတ်ပို့သ ရုပ်ဆောင်ဂွမ်းပုံြ ကီးရဲ့ခင်ပွ န်းသရုပ်ဆောင်ဦး ချစ်ပြုံးဟာဇူလိုင်လ၃၀ ရက်နေ့ကကို ဗစ်ရောဂါ ကွ.ယ်လွ.န် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးချစ်ပြုံးဟာ ဝါရင့်ဇာတ်ပို့ဇာ တ်ရံသရုပ်ဆောင်တ ဦးဖြစ်ပြီး၊မြန် မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ် ကား များစွာမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြ စ်ပါတယ်။
ဦးချစ်ပြုံးကွ.ယ်လွ .န်သွားတဲ့အတွက်မိသားစု နဲ့ချစ်တဲ့ပရိသ တ်တွေက ဝ.မ်းနည်.းခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင် သက်၄၉နှစ်ပြည့်ပြီး၃ ရက်အကြာ မှာရု တ်တရတ်ကွ. ယ်လွ.န်သွားခဲ့ တာကြောင့်ဂွမ်းပုံကြီးအ တွက်ကတော့အ လွန်ဝမ်းန.ည်းစ ရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာ အလုပ်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းက ဝါသနာပါခဲ့တဲ့ဂွမ်းပုံကြီးကအသ.က်၈နှစ် အရွယ်မှာအရပ် ထဲကပြဇာတ်တွေလိုက် ကခဲ့ပါ တယ်။အဲ့ဒီနောက် အနုပညာအလု ပ်လုပ်ဖို့အခွင့် အရေးရခဲ့တဲ့အချိန် မှာတော့ကြိုးကြိုးစား စားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂွမ်းပုံကြီး ကတော့ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေထဲ မှာပါဝင်ရင်း‌တွေ့မြင်ပါများရ င်းဦးချစ်ပြုံးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
အနုပညာလော ကမှာအတူကြိုး စားရုန်းကန်ရင်းအိမ်ေ ထာင်သ.က်၄၉နှစ်ပြည့်ပြီး၃ရက်အကြာ မှာ‌ချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းြ ဖစ်သူ ဟာကွ.ယ် လွ.န်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယလှို င်းမှာအောက်ဆီဂျ.င် ရု.တ်တရ တ်ကျပြီးကွ.ယ်လွ. န်သွားခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအ တွက်ဂွမ်းပုံြ ကီးကတော့ဝ.မ်းန .ည်းစွာလွမ်းဆွတ်တမ်း တနေခဲ့ပါတ ယ်။လက်ရှိမှာတော့ လိမ္မာတဲ့သားနှစ်ယော က်ကျန်ခဲ့ပါတ ယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်ကြွေလွ င့်သွားတဲ့အတွက်ပရိတ်သ တ်တွေကများ စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေ တာကိုလည်းတွေ့မြ င်ရပါတယ်နော်။
ပရိသတ်ကြီးေ ရခင်ပွ.န်းကွ.ယ်လွ .န်သွားလို့ဝမ်းန.ည်းနေတဲ့ အန်တီဂွမ်းပုံကြီးကို အားပေးစကားလေးတွေေြ ပာခဲ့ပါအုန်းနော် ။ဦးချစ်ပြုံးလည်းကော င်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝသို့ရော က်ရှိပါစေလို့ဆုတော င်းပေးပါတ ယ်။မြန်မာြ ပည်ကြီး လဲအမြန်ဆုံးငြိမ်း ချမ်းပြီးဖတ်​ရှု့​ပေးကြတဲ့မြန်မာြ ပည်သူ/သားများအားလုံး စစ်အာဏာ ရှင်လက်အော က်က ​နေအမြန်ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြ ပါစေလို့ဆုတောင်း​ပေးလိုက်ရ ပါတယ်။Credit
ပရိသ တ္ေတြခ်စ္ခင္ အားေပးရတဲ့သ ႐ုပ္ေဆာင္ေတြျဖစ္ ၾကတဲ့ဂြမ္း ပုံႀကီးနဲ႔ဦးခ်စ္ျပဳံး တိူ႔ကေတာ့ အႏုပညာနယ္ပ ယ္မွာဆယ္ စုႏွစ္တခုၾကာ ရပ္တ ည္ခဲ့တဲ့သူေတြ လည္းျဖစ္ ပါတယ္။ က်ရာဇာတ္ ႐ုပ္မွာပီျပင္ပိုင္နိုင္ စြာသ႐ု ပ္ေဆာင္နိုင္ျ ပီးလိုက္ ဖက္တဲ့အႏုပညာ စုံတြဲလည္းျဖစ္ပါတ ယ္။
ဇာတ္ပို႔သ ႐ုပ္ေဆာင္ဂြမ္းပုံျ ကီးရဲ့ခင္ပြ န္းသ႐ုပ္ေဆာင္ဦး ခ်စ္ျပဳံးဟာဇူလိုင္လ၃၀ ရက္ေန႔ကကို ဗစ္ေရာဂါ ကြ.ယ္လြ.န္ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဦးခ်စ္ျပဳံးဟာ ဝါရင့္ဇာတ္ပို႔ဇာ တ္ရံသ႐ုပ္ေဆာင္တ ဦးျဖစ္ၿပီး၊ျမန္ မာ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုဇာတ္ ကား မ်ားစြာမွာပါဝင္ခဲ့သူၿဖ စ္ပါတယ္။
ဦးခ်စ္ျပဳံးကြ.ယ္လြ .န္သြားတဲ့အတြက္မိသားစု နဲ႔ခ်စ္တဲ့ပရိသ တ္ေတြက ဝ.မ္းနည္.းခဲ့ရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ သက္၄၉ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၃ ရက္အၾကာ မွာ႐ု တ္တရတ္ကြ. ယ္လြ.န္သြားခဲ့ တာေၾကာင့္ဂြမ္းပုံႀကီးအ တြက္ကေတာ့အ လြန္ဝမ္းန.ည္းစ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အႏုပညာ အလုပ္ကိုငယ္စဥ္ကတည္းက ဝါသနာပါခဲ့တဲ့ဂြမ္းပုံႀကီးကအသ.က္၈ႏွစ္ အရြယ္မွာအရပ္ ထဲကျပဇာတ္ေတြလိုက္ ကခဲ့ပါ တယ္။အဲ့ဒီေနာက္ အႏုပညာအလု ပ္လုပ္ဖို႔အခြင့္ အေရးရခဲ့တဲ့အခ်ိန္ မွာေတာ့ႀကိဳးႀကိဳးစား စားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဂြမ္းပုံႀကီး ကေတာ့႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြထဲ မွာပါဝင္ရင္း‌ေတြ႕ျမင္ပါမ်ားရ င္းဦးခ်စ္ျပဳံးနဲ႔ဆုံေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။
အႏုပညာေလာ ကမွာအတူႀကိဳး စား႐ုန္းကန္ရင္းအိမ္ေ ထာင္သ.က္၄၉ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၃ရက္အၾကာ မွာ‌ခ်စ္ရတဲ့ခင္ပြန္းျ ဖစ္သူ ဟာကြ.ယ္ လြ.န္ခဲ့ပါတယ္။ တတိယလွို င္းမွာေအာက္ဆီဂ်.င္ ႐ု.တ္တရ တ္က်ၿပီးကြ.ယ္လြ. န္သြားခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအ တြက္ဂြမ္းပုံျ ကီးကေတာ့ဝ.မ္းန .ည္းစြာလြမ္းဆြတ္တမ္း တေနခဲ့ပါတ ယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ လိမၼာတဲ့သားႏွစ္ေယာ က္က်န္ခဲ့ပါတ ယ္။တန္ဖိုးရွိတဲ့အႏုပညာ ရွင္တစ္ေယာက္ေႂကြလြ င့္သြားတဲ့အတြက္ပရိတ္သ တ္ေတြကမ်ား စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေန တာကိုလည္းေတြ႕ၿမ င္ရပါတယ္ေနာ္။
ပရိသတ္ႀကီးေ ရခင္ပြ.န္းကြ.ယ္လြ .န္သြားလို႔ဝမ္းန.ည္းေနတဲ့ အန္တီဂြမ္းပုံႀကီးကို အားေပးစကားေလးေတြေျ ပာခဲ့ပါအုန္းေနာ္ ။ဦးခ်စ္ျပဳံးလည္းေကာ င္းရာမြန္ရာ ဘုံဘဝသို႔ေရာ က္ရွိပါေစလို႔ဆုေတာ င္းေပးပါတ ယ္။ျမန္မာျ ပည္ႀကီး လဲအျမန္ဆုံးၿငိမ္း ခ်မ္းၿပီးဖတ္​ရႈ႔​ေပးၾကတဲ့ျမန္မာျ ပည္သူ/သားမ်ားအားလုံး စစ္အာဏာ ရွင္လက္ေအာ က္က ​ေနအျမန္ဆုံးလြ.တ္ေျမာက္ၾက ပါေစလို႔ဆုေတာင္း​ေပးလိုက္ရ ပါတယ္။Credit